Sida loo badalo iyo downlaod video 4k ee Qaabka MP4
Sida loo badalo Videos in qaabka MP4 4K ama beddelid ka Videos 4K in qaabab wax
Sida loo Download 4K Videos in MP4.
HD (High qeexidda) noo bixiyeen xal sare iyo tayada codka ka xoogbadan. Waxaa qiyaastii sano. Laakiin hadda waxa ay noqotay wax la soo dhaafay. Aficionados Tech hadda rajeynaynaa in technology 4K ah. Waxaa loola jeedaa kala duwan ee xalinta pixel siman taas oo ah 4000 pixels. Waxaa la noqdo heerka warshadaha ah ee Digital shineemooyin, Digital TV-ga iyo shineemada digital. Iyada oo warbaahinta geeyo iyo aad u badan oo isticmaalaya qaab this, sida YouTube iyo Netflix, dadka isticmaala ku raadinayso ah helitaanka qalab taas oo la socon kara qaab 4K ah. In kasta oo kale oo ka jaban yahay in ay isticmaalaan wanaagsan 4K video Converter. Sidaas waxaad daawan kartaa videos leh tayo fiican, waxaana tafaasiil cad ah.
Wondershare Video Converter Ultimate waa mid ka mid ah ugu dhaqsiyaha badan xirfadeed video Converter u qaabab badan, oo ay ku jiraan 4K for Windows iyo sidoo kale Mac. Waxa uu ballan qaaday in ay samatabbixin sawir fiican oo tayo leh dhawaaqa. Converter 4K waxa uu leeyahay awood u leeyahay inuu badalo wax video in xal kasta oo loo siin waayay 4K qaab MP4 videos, iyadoo xallinta 3840 x 2160 ama 4096 x 2160. The Converter 4K u awood badan in loogu badalo karaa 4K Camera videos, 4k HD Ultra videos ama wax 4K videos soo bixi Netflix, YouTube iwm qaabab video kala duwan sida MOV, DivX, AVI, FLV, AVI sidoo kale HD wmv, MP4 HD, HD MKV, HD TS, HD AVI, HD Mpg, 720p TRP HD ama 1080p, HD TS. Marka laga reebo diinta waxaa edit karaa, kor loogu qaado, gubi, abaabulo oo kala soo bixi videos aad.
Badalidda kala duwan oo qaab video in MP4 4K xalinta 3840 x 2160 ama 4096 x 2160.
Badalidda 4K video, camera 4K kasta oo video, 4K videos soo bixi internet inay qaab caadiga ah ee MOV videos, DivX, AVI, FLV, AVI sidoo kale HD wmv, MP4 HD, HD MKV, HD TS, HD AVI, HD Mpg, HD TRP 720p ama 1080p, HD TS.
Diinta Easy ee 4K videos for qalabka sida iPad, iPhone, Apple TV, qalabka Android iwm
Beddelaan 4K u sixiddiisa Ujeedada in Final Goo, iMovie, Kan sameeyey Movie, Song Vegas iwm
Durba dhisay 4K downloader soo bixi videos in 4K qaab ka Netflix, YouTube iwm
150 audio qaabab laga heli karaa si loogu badalo video.
The version 4K Video Converter in Windows waa la jaan qaada Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, iyo Windows 10.
4K Video Converter si buuxda u taageeray by Mac. Qaybaha Leopard 10.5, Snow Leopard 10.6, Libaaxa 10.7, Mountain Libaaxa 10.8, Mavericks 10.9 iyo Mac OS X Yosemite 10,10.
Tani waa software ah bixiyo laakiin waa saamaxaya kuwa isticmaala in ay isku dayaan for free 3 beddelaad.
Qaybta 1aad: Sida loo badalo Videos in qaabka MP4 4K ama beddelid ka Videos 4K in qaabab kasta oo sida MP4 AVI, MOV, 1080p / 720p / 480p, wmv.
Waxaad bilaabi waa soo degsado ka Wondershare Video Converter Ultimate Wondershare Video Converter Ultimateas \_ diyaar, raac tallaabooyinka hoos ku siiyo:.
Tallaabada 1 Si files dejinta.
Waa in aad soo dhoofsadaan video files aad jeceshahay inaad ku beddelato qalab Converter ah. Waxaa aad leedahay ikhtiyaar ah ee si toos ah u isticmaalaya jiita iyo iska codsiga ama ay u socdaan si badhanka 'File' in bar menu iyo doorashada 'Load Media Files'.
Tallaabada 2 Dejinta qaab la doonayo.
Badalidda videos in qaabka MP4 4K:
By gujinaya batoonka 'Qaabka' oo laga helo hoose ee guddiga, waxa uu furi doonaa sanduuq wada hadal ee suuqa kala qaab ah. In ka 'qaab' icon, waxaad ka heli doontaa 'video' doorasho. Waxaa xulo qaabka '4K Video MP4'.
Badalidda 4K ama Ultra videos HD galay qaabab kale audio iyo video.
Ku bilow adigoo gujinaya batoonka 'qaab' hoos ku helay ee shaashadda. In ka 'qaab' doorasho dooro 'video' ama qaybaha 'audio', tani waa meesha aad ka heli doontaa qaabab audio iyo video kala duwan. Dooro mid ka mid ah oo aad u baahan tahay.
Wixii diinta 4K ama Ultra HD qaab video galay MOV, wmv, MP4 HD, MKV, wmv iwm ee 720p ama 108p, raac habkan. Tag ah 'qaab' icon dooro 'HD' doorasho. Riix doorasho 'goobaha' dhinaca midig in goobaha la furo gujisid, halkan waxaad dooran kartaa qaraarada video ka 1920 * 1080 ama 1280 720 *.
Tallaabada 3 badalidda videos
Riix si ay 'badalo' icon aad u bilowdo hawsha ee diinta videos ka 4K MP4 videos in qaabab kale ama qeybsanaan.
Tani waa sida aad u bedeli kartaa video files.
Qeybta 2: Sida loo Download 4K Videos in MP4.
Tallaabada 1 Ku xiridda Video 4K ka Downloader.
Tallaabada ugu horeyn waxaa lagu soo degsado software iyo helitaanka waxa ay ku rakiban yihiin. Ka dib markii la rakibey, abuurtaan barnaamijkan iyo dhirta dhex si aad u hesho sudhan waxaa ka mid ah. Its user saaxiibtinimo interface ka dhigi doonaa shaqo badan ka sahlan.
Tallaabada 2 Search for the 4K videos aad rabtid in aad ka soo dejisan.
4K videos waxaa taageera ee daalacashada ee Chrome, Firefox iyo IE. In mid ka mid ah daalacashada ayay u websites geeyo warbaahinta tagaan. Raadi nooca 4K videos aad jeceshahay. Dooro mid ka mid ah iyo ciyaaro video in.
Tallaabada 3 Download 4K videos
In browser marka aad video waxaa loading, waxaad ka heli doontaa sabayn button Download. Waxaa doonaan rukun ee kor ku xusan xaq ku yiilleen video ah. Hadda mid ka mid ah si toos ah u soo bixi kartaa video ah oo riixaya in download button in. Markaas barnaamijka ku bilaaban doono si ay u falanqeeyaan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad la xiriira sida xawaaraha video download, size iyo magaca video download lagu jiro.
Hab kale oo kala soo bixi ku videos 4K waa ay kaga dayanayaan URL video iyo waxa dhajinta galay meesha bannaan ee URL siiyo bidix ee kor ku xusan ee shaashadda barnaamijka. Markaas habka dajinta bilaabo. Waa in aad doorato jiidayeen URL ee barnaamijka haddii size file waa weyn. Maxaa yeelay sugaya video in load noqdo hareen.
Marka geeddi-socodka dajinta waa dhameystiran, click double on video ka category Download ay ku ciyaaraan. Haddii cabbirka video 4K waa weyn, isku day inaad diinta soo galay qaabab kala duwan. Si aad si fudud dajiyaan karaa qalab kale oo aad ku qaadi karo. Waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya batoonka 'diinta' kaas oo la soo bandhigay dhanka midig.
> Resource > Video > Sida loo badalo iyo downlaod video 4k ee Qaabka MP4